Shiinaha ALRJ Taxanaha Vacuum qasitaanka Emulsifier Warshadaha iyo Warshad | Iswaafajiyay
ALRJ Taxanaha Vacuum Isku qasida Emulsifier
Qalabku wuxuu ku habboon yahay emulsification ee daawada. Qurxinta, alaabooyinka kiimikada wanaagsan, gaar ahaan maaddada leh isku-dheji-cufan jajab sare iyo waxyaabo adag. Sida qurxinta, kareemka, boomaatada, saabuunta, saladhka, suugada, looshinka, shaambo, cadayga yon majones iyo wixii la mid ah.
Oo ay ku jiraan dheriga emulsifying ugu weyn, dheriga biyaha, dheriga saliidda iyo jir shaqada.
Caadi ahaan dheriga saliida waxaa loo isticmaalaa kala dirida xoogaa adag in sheyga kaliya lagu dhex milmi karo saliida, ka dibna dareeraha la kala diro waxaa lagu nuugi doonaa dheriga emulsify tuubooyin jilicsan.
Shaqada dheriga biyuhu wuxuu la mid yahay dheriga saliidda.
Dheriga Emulsify waxaa loo isticmaalaa in lagu shubo waxyaabaha ka soo nuuga dheriga saliida iyo dheriga biyaha.
Model Awood wax ku ool ah Emulsify Agitator Cabirka Wadarta Awooda (kw)
kw r / daqiiqo kw r / daqiiqo Dhererka balac miisaanka Max H
ALRJ-2000 2000 22 0-3500 7.5 0-40 4850 4300 3600 Wiish la'aan 46
Faaruqiyaha emulsifier-ga ayaa xiiraya, kala firdhiya oo saamayn ku yeelanaya qalabka iyada oo loo marayo wareegga xawaaraha sare leh ee madaxa homogenizing ee ku xiran mashiinka. Sidan oo kale, maaddadu waxay noqon doontaa mid jilicsan oo kor u qaadaysa is-dhexgalka saliidda iyo biyaha. Mabda'a ayaa ah in la isticmaalo emulsifier-xiiraha-xiirida sare si dhakhso leh oo siman loogu qaybiyo hal weji ama wajiyo badan weji kale oo isdaba joog ah oo ku saabsan xaalad faaruq ah. Waxay u isticmaashaa tamarta firfircoon ee firfircoon ee ay keensato mashiinka si ay maaddada uga dhigto mid cidhiidhi ku ah stator iyo rotor. Farqiga u dhexeeya, waxaa lagu soo rogay boqollaal kun oo shey oo koronto ah daqiiqaddii. Saameynta isku dhafan ee isku ururintii centrifugal, saameyntii, jeexitaankii, iwm isla markiiba way kala firdhisaa oo si isku mid ah ayey isu firdhisaa. Ka dib soo noqnoqoshada isdabajoogga sare, alaab tayo sare leh oo aan lahayn goobooyin, jilicsan oo xasilloon, ayaa ugu dambeyntii la helay.
Emulsifier-ga waxaa ka mid ah jirka dheriga, daboolka dheriga, cag, suufka kiciya, mootada walaaqeysa, taageerada kicinta, qalabka quudinta, tuubada dheecaanka, iyo qalabka faakiyuumka. Qalabka quudinta badeecadu wuxuu ku yaal salka dheriga hoostiisa, qalabka faakiyuumka badeecadu wuxuu ku xiran yahay Qalabka quudinta ee aan soo sheegnay ayaa iskaashanaya si uu u sameeyo hawlgal otomaatik ah oo otomaatig ah. Marka la barbardhigo farshaxanka hore, emulsifier-ga faaruqinta ayaa si toos ah ugu dari kara walxaha iftiinka ka laalaaday dheriga oo si siman ayuu isugu qasan karaa, wuxuuna ku ogaan karaa xakameynta tooska ah ee quudinta.
Faa'iidooyinka Badeecada ee Emulsifier
1. Fikradda cusub ee isku dhafan ee faaruqinta emulsifier-waxay xaqiijin kartaa tayada sare ee wax soo saarka waxayna gaabin kartaa waqtiga wax soo saarka.
2. Naqshadeynta qaabaysan ee mowduucyada waxqabadka, emulsifier-ka faaruqintu wuxuu leeyahay shaqooyin badan iyo dabacsanaan
3. Madaxa la isku qurxiyo wuxuu dooran karaa madaxa firidhsan ee habboon iyadoo loo eegayo astaamaha kala duwan ee maaddada. Ka dib emulsification, cabirka walxaha waa yar yahay oo ganaax, sheyga waa mid isku mid ah, wuuna xasilloonaan karaa xitaa wakhti dheer.
4. Waxaa jira aaladaha kiciya wareega ee taangiga horay loo qaso, iyo mashiinka emulsifying vacuum wuxuu hubin karaa xasiloonida iyo is dhexgalka buuxa ee qalabka ku jira haanta.
5. Si fiican isugu qas jihada toosan iyo toosan
6. Xawaaruhu waa mid aad u jilicsan. Emulsifier firidhku wuxuu isku beddeli karaa jihada dhinaca dambe, ma laha dhammaadyo dhimman, waa la kululayn karaa oo la qaboojin karaa, waqtigana si weyn ayaa loo gaabiyey.
7. Nidaamka wax soo saarka isku dhafan oo dhami wuxuu qaataa PLC hawlgalka shaashadda taabashada elektiroonigga casriga ah, kaas oo lagu hagaajin karo iyadoo loo eegayo shuruudaha
Hore: JFP-110A Taxanaha Vertical Capsule Polisher
Xiga: Mashiinka Mashiinka ee Buuxinta iyo Daaweynta
Vacuum Emulsifier Mashiinka
Vacuum Emulsifying Mashiinka Mashiinka
Vacuum Homogenizer Cream Mashiinka
Vacuum Homogenizer fiicni
Vacuum Mashiinka Homogenizer
Mashiinka Mashiinka ee Buuxinta iyo Daaweynta